Shina GDU karazana famokarana silika karbida gazy sy mpanamboatra | SICTECH
Ny toetra mampiavaka ny karazan'afom-pamokarana karbôna silika U: ny singa fanamafisana karbônika karbôna dia namboarina avy amin'ny singa fanamafisana karbônika karbôna roa miaraka amin'ny faran'ny hatsiaka iraisana. U singa fanamainana karbônika karbôna dia azo ampifandraisina amin'ny tadin'ny herinaratra amin'ny faran'ny fatana fandoroana. Ampiasaina indrindra amin'ny lafaoro avo sy ny lafaoro misy hafanana avo lenta izy io. Ny mampiavaka azy dia ny fitsitsiana herinaratra sy ny fiainana ao anaty lafaoro lava.
Ny singa fanafanana karbôna silika dia hihetsika amin'ny akora simika marobe miovaova avy amin'ny fitaovana voaroaka mandritra ny fitifirana. Raha misy fiatraikany amin'ny entona sasany toy ny rano, hidrogen, azota, solifara, halogen ary alona alona, ​​Rehefa mifandray ny alkaly, ny sira, ny metaly anidina ary ny oksida metaly dia mety haneho hevitra izy ireo, hanimba na hanamontsina. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny hifehezana ny fomba fampiasana marina, izay manitatra ny fiainana ny elanelan'ny karbôna sidaida, ary koa ny hafanana sy ny haavon'ny hafanana avo kokoa.
1. Ny singa fanafanana karbônika sôlida dia manana tanjaka mekanika avo lenta, ary ny tanjaky ny hiondrika dia mitovy amin'ny 100-120MPa.
2. Ny mari-pana avo lenta dia mety hahatratra 1500 degre.
3. Ny tahan'ny taratra mahery infrared, ny savaivony mitovy amin'ny savony karbôna dia 5-10 isaky ny tariby nickel-chromium mahazatra.
4. Fiainana maharitra, fametrahana sy fikojakojana mora foana.
5. Ny singa fanafanana karbônika silikika dia misy fanoherana mahery vaika amin'ny oksidasiana, fanoherana ny harafesina matanjaka ary manana fanoherana fikorontanana hafanana tena tsara.
Azontsika atao ny mamoaka ny habeny amin'ny latabatra koa, ampahafantaro fotsiny ahy ny habe tadiavinao.
DIAMETER (D) TOA FANASANA (L1) ZONY MANASA (L2) DISTANCE (E) BRADGE fanoherana
Teo aloha: Elemera fanamainana karbôna silika karazana GC
Manaraka: LS karazana (spiral avo roa heny) singa fanafanana karbôna silika
Heater elektrika herinaratra
Ireo singa fanamainana ny lafaoro
Singa Heater Heater
Elemen'ny fanafanana Sis
Elema fanafana Spiral